ရီးယဲလ်အသင်း ကစားသမားတွေရဲ့ လစာငွေစာရင်းကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီ
18 Aug 2018 . 5:25 PM
Los Blancos လို့ အမည်ပြောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ ဥရောပရဲ့ အောင်မြင်မှုအများဆုံးအသင်းဆိုတာ ပရိသတ်တွေ အားလုံးအသိပါပဲ။ သမိုင်းအစဉ်အဆက်ကို ကြည့်ရင်လည်း နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကို ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေးတွေနဲ့ ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အသင်း၊ မြင့်မားတဲ့လစာငွေ အသုံးပြုတဲ့အသင်း ဆိုပြီး ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ရပ်ကို စိုက်ထူခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ငွေကြေးလှိုင်းလုံးကြီးတွေ စီးဆင်းလာတာနဲ့အတူ ရီးယဲလ်အသင်းဟာ အရင်လောက် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု မရှိတော့ပေမယ့် “ဆင်ပိန် ကျွဲလောက်”ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုင်း သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့ ဆက်ထိန်းထားနေဆဲပါ။
ဒီနွေရာသီမှာ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲသွားပေမယ့် လက်ရှိကစားသမားတွေအတွက် မြင့်မားတဲ့လစာငွေ ဆက်လက်ပေးချေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီသစ်မှာ ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေ ရရှိနေတဲ့ လစာငွေပမာဏကို နာမည်ကြီး Sportskeeda အားကစားဝက်ဘ်ဆိုက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ ဂိုးသမားသစ် ကော်တိုအာ Courtois ရဲ့လစာငွေတော့ မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ကဲ ..ပရိသတ်ကြီးရေ .. ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေ တစ်ပတ်လစာ ဘယ်လောက်အထိရနေသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
17 Borja Mayoral, £10,000 per week
16 Dani Ceballos, £20,000 per week
15 Alvaro Odriozola, £45,000 per week
14 Lucas Vazquez, £60,000 per week
13 Nacho Fernandez, £70,000 per week
12 Keylor Navas, £85,000 per week
11 Marco Asensio, £90,000 per week
10 Casemiro, £90,000 per week
9 Daniel Carvajal, £100,000 per week
8 Isco, £120,000 per week
7 Raphael Varane, £140,000 per week
6 Karim Benzema, £150,000 per week
5 Luka Modric, £180,000 per week
4 Marcelo, £200,000 per week
3 Sergio Ramos, £200,000 per week
2 Toni Kroos, £200,000 per week
1 Gareth Bale, £350,000 per week
ဒါကတော့ ဒီရာသီ ရီးယဲလ်ကစားသမားတွေရဲ့ တစ်ပတ်လစာငွေ စာရင်းပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒို မရှိတော့တဲ့ အချိန်မှာ ဂါရတ်ဘေးလ် Gareth Bale က ရီးယဲလ်ရဲ့ လစာငွေအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် . .ပရိသတ်ကြီးရေ
ရီးယဲလျအသငျး ကစားသမားတှရေဲ့ လစာငှစောရငျးကို ထုတျပွနျလိုကျပွီ
Los Blancos လို့ အမညျပွောငျသတျမှတျထားတဲ့ ရီးယဲလျအသငျးဟာ ဥရောပရဲ့ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးအသငျးဆိုတာ ပရိသတျတှေ အားလုံးအသိပါပဲ။ သမိုငျးအစဉျအဆကျကို ကွညျ့ရငျလညျး နာမညျကြျောကစားသမားတှကေို ကမ်ဘာ့စံခြိနျတငျပွောငျးရှကွေ့ေးတှနေဲ့ ချေါယူခဲ့တဲ့အသငျး၊ မွငျ့မားတဲ့လစာငှေ အသုံးပွုတဲ့အသငျး ဆိုပွီး ဂုဏျသိက်ခာတဈရပျကို စိုကျထူခဲ့တယျ။ အခုနောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ငှကွေေးလှိုငျးလုံးကွီးတှေ စီးဆငျးလာတာနဲ့အတူ ရီးယဲလျအသငျးဟာ အရငျလောကျ ငှကွေေးသုံးစှဲမှု မရှိတော့ပမေယျ့ “ဆငျပိနျ ကြှဲလောကျ”ဆိုတဲ့ စကားပုံအတိုငျး သူတို့ရဲ့ဂုဏျသိက်ခာကိုတော့ ဆကျထိနျးထားနဆေဲပါ။
ဒီနှရောသီမှာ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo အသငျးနဲ့ လမျးခှဲသှားပမေယျ့ လကျရှိကစားသမားတှအေတှကျ မွငျ့မားတဲ့လစာငှေ ဆကျလကျပေးခနြေဆေဲဖွဈပါတယျ။ ရာသီသဈမှာ ရီးယဲလျကစားသမားတှေ ရရှိနတေဲ့ လစာငှပေမာဏကို နာမညျကွီး Sportskeeda အားကစားဝကျဘျဆိုကျက ထုတျပွနျခဲ့ပွီး အဲဒီထဲမှာ ဂိုးသမားသဈ ကျောတိုအာ Courtois ရဲ့လစာငှတေော့ မပါဝငျခဲ့ဘူး။ ကဲ ..ပရိသတျကွီးရေ .. ရီးယဲလျကစားသမားတှေ တဈပတျလစာ ဘယျလောကျအထိရနသေလဲဆိုတာ ကွညျ့လိုကျရအောငျ . . .
ဒါကတော့ ဒီရာသီ ရီးယဲလျကစားသမားတှရေဲ့ တဈပတျလစာငှေ စာရငျးပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒို မရှိတော့တဲ့ အခြိနျမှာ ဂါရတျဘေးလျ Gareth Bale က ရီးယဲလျရဲ့ လစာငှအေမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ . .ပရိသတျကွီးရေ